के अर्बपतिहरू आफ्नै धनका योग्य छन्? – Health Post Nepal
२०७७ जेठ १८ गते १०:११
अर्बपतिहरू उनीहरूको विशाल भाग्यको लायक छन् भन्ने धारणा हास्यास्पद र विनाशकारी मिथक हो।
कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) महामारीको बेला सबैलाई कठिन छ। हामी सबै एउटै डुंगामा छौं। यो संकटभरमा सामान्य तबरले अलग रहन भनिएको छ।
यो सत्य हो कि हामी सबै एकसाथ टाइटानिकमा छौं। यद्यपि केही प्रथम श्रेणीको सवारी गर्दैछन्। केही तेस्रो कक्षाको सवारी गर्दैछन्। अरुहरू तल रोइङको किस्तीमा छन्। तर त्यहाँ पुग्न पर्याप्त लाइफबोटहरू छैनन्।
यथार्थमा धनीहरू पनि उनीहरूको सम्पत्तिले यस संकटबाट जोगिएका छैनन्, जसले उनीहरूलाई सुपर याचमा भाइरसबाट शरण लिन वा निजी जेटहरूमा भाग्नका लागि सक्षम बनाउँछ। कतिपयले यो कठिन समयमा अभूतपूर्व इनाम पनि उपभोग गरिरहेका छन्। यो विशेषगरी अमेरिकाको मामला हो।
कोरोना भाइरसको संकटका बेलामा अमेरिकी अर्बपतिहरूले मध्यमार्च र मध्य मे महिनाबीच दुई महिनामा ४३४ विलियन डलरभन्दा बढीको अप्रत्याशित लाभ आर्जन गरेका छन्।
वासिङटनस्थित इन्स्टिच्युट फर पोलिसी स्टडिज एन्ड अमेरिकन्स फर ट्याक्स फेयरनेसको नयाँ रिपोर्टले देखाएको छ।
यो त्यस्तो समय हो, जब कम्तीमा ४० करोड अमेरिकीहरू कामबाहिर छन् र प्राप्त गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्। साथमा विश्वभर २ सय ६५ करोड मानिस भोकमरीको जोखिममा छन्।
फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरू आफ्नो स्वास्थ्य र जीवनलाई जोखिममा राखेर समाजलाई कामकाजी बनाउँदै बिरामीको हेरचाह गर्छन्। अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो वित्तीय विजेता विश्वका धनी मानिस जेफ बेजोस हुन्, जसले आफ्नो भाग्य ३५ विलियन डलरले विस्तार गरेको देखेका छन्। लकडाउनमा फसेका मानिस अनलाइन सपिङमा ह्वात्तै बढेका कारण उनको कम्पनी अमेजनको मूल्य बढेको छ।
जब कोही अर्बपतिहरूको अश्लील धनको आलोचना गर्दछन्। त्यहाँ कोही छन् जसले उनीहरूको रक्षा गर्न हतार गर्छन्। यस्तो तर्क गर्छन् कि आलोचकहरू केवल इष्र्यालु छन्। अर्बपतिहरू सफलताको योग्य छन् र उनीहरूले ठूलो भाग्य कमाउँछन्।
के यो वास्तविक मामला हो ?
एक सुपर हिरो मूल मिथकजस्तै त्यहाँ एक विशेष कथा छ, जुन प्राविधिक उद्योगका अर्बपतिहरू वरपर घुम्छ। यो यस प्रकारले जान्छ। जस्तो कि उनीहरूको शयनकक्ष, ग्यारेज, छात्रावासमा काम गर्दैगर्दा एक सानदार विचारको साथ आए। विषमताविरुद्धको विचार जसलाई उनले बजारमा ल्याए र अहिले उनीहरूले प्रतिभाको फलमा मज्जा लिइरहेका छन्।
यो सत्य हो कि केही अर्बपतिहरू केही पनि नगरी (वा कमसेकम धेरै अधिक भाग्यको साथ) बाट सुरु गरे र धेरैले आफ्नो प्रारम्भिक करियरमा प्रेरणादायी चमक प्रदर्शन गरे। यद्यपि के यी उद्यमीहरूको बुद्धिमता सबैको श्रमभन्दा बढी र धेरै मूल्यवान छ वा मिश्रित?
अकल्पनीय कुरा के छ भने अमेरिकी घरपरिवारलाई ६०,००० डलर कमाउन कम्तीमा २.५ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। उनीहरूले १४७ विलियन डलरको अनुमानित मूल्य जेफ बेजोसलाई जम्मा गर्न सक्छन्। यदि उनीहरूले एक पैसा खर्च गरेनन् भने। सफ्टलुरमा कम तलब पाएको अमेजन कार्यकर्ताले आफ्नो मालिकको भाग्य भेला गर्न आफ्नो सम्पूर्ण आम्दानीको चार लाखभन्दा बढी वर्ष लिन सक्छ।
यी विश्वका सबैभन्दा धनी देशका कामदारहरू हुन्। अब कल्पना गर्नुहोस् कि यस किसिमको पैसा बनाउनका लागि दक्षिण एसिया वा उप सहारा अफ्रिकाका गरिब कामदारहरूलाई कति समय लाग्छ?
एउटा क्षेत्र जहाँ करोडपति वर्ग र ठूला निगमहरू बैंकतर्फ हेर्दै हाँस्दै छन्। समाजका अन्य सदस्यहरू दुःखमा रोइरहेका छन्, त्यहाँ कर छ। सामान्य पारिश्रमिककमा उनीहरू, विशेष गरी एक मजबुत सामाजिक सुरक्षा नेट भएका, अनुपातिक रूपमा करको बोझ वहन गर्न सक्नेहरू, कर्पोरेट कर दरहरू र उच्च आय र पूँजीमा लाग्ने कर उन्नत अर्थतन्त्रहरूमा ऐतिहासिक हिसाबले प्रभावित भएको छ। एक डे फ्याक्टो रिग्रेसिभ ट्याक्स प्रणाली बढ्दो रूपमा नयाँ बनेको छ।
यो कसैको विचार वा काम नैतिक वा दर्शनबिना सबैको श्रमको हजारौं वा लाखौं वर्ष लायक छैन नभनीकन जान्छ। यो धारणा विशेष रूपमा संकटको समयमा अपमानजनक छ। किनकि समाजका मानिस काम गर्नका लागि नर्सहरू, डाक्टरहरू, आपत्कालीन कामदारहरू, हेरचाहकर्ताहरू, सुपरमार्केट स्टाफहरू, वितरण व्यक्तिहरू र उपयोगिता श्रमिकहरूमा निर्भर गर्दछ, टाइकुन, शीर्ष सीईओ वा हेज कोष प्रबन्धकहरूमा होइन।
यसबाहेक लगभग अनिवार्य रूपमा कुरुप र अनुमान अन्तर्निहित छ, जसले अर्बपतिहरूले आफ्नो अथाह भाग्य कमाएको भन्ने धारणामा गम्भीर शंका उत्पन्न गर्दछ। जबकि निश्चित रूपमा राम्रा अर्बपति र खराब अर्बपति छन्। जहाँसम्म अनुमान लगाउन सकिन्छ, त्यहाँ कुनै अर्बपतिहरू छैनन् जसले नैतिक रूपले शंकास्पद अभ्यास प्रयोग नगरी आफ्नो अर्बाैंको निष्पक्ष र वर्ग बनाएका छन्।
यी अभ्यासहरूमा कम भुक्तानी गर्ने वा ओभर वर्किङ स्टाफ, उनीहरूको कामदारहरूले पुर्याएको उत्पादकत्वको लाभ एकाधिकार गर्ने, रोजगारी निर्यात गर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने स्नेह र व्यायाम एकाधिकार वा निकट एकाधिकारसम्म पनि समावेश गर्न सक्छन्।
यसले यो निष्कर्ष दिन्छ कि अन्यायी प्रणालीको नतिजा हेर्नका लागि स्पष्ट छन्। उदाहरणका लागि इन्स्टिच्युट फर पोलिसी स्टडिज रिपोर्टअनुसार अमेरिकाको सबैभन्दा मोटो बिरालाहरूले १९९० र २०१८ को बीचमा उनीहरूको सम्पत्ति ११०० प्रतिशतले वृद्धि भएको देख्यो। यद्यपि उनीहरूको समानुपातिक कर दायित्व एकै पटकमा ७९ प्रतिशतले घट्यो।
योभन्दा माथि, पूँजी र धनी व्यक्तिको अभूतपूर्व गतिशीलता, दशकौंको नोक्सान र सहज विश्वव्यापी कर प्रणालीको अभाववा कर नीतिहरूको समन्वय भयो। जसका कारणले धेरै कर्पोरेसन र अर्बपतिहरूले उनीहरूको नाफालाई कर प्याराडाइसेसमा हस्तान्तरण गर्न सक्षम पारिदिएका छन्। साथै, उनीहरूको करको बोझ र सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई पनि छल्न मदत गरेको छ। यसले कर हेभनहरू गुमाउने डरले देशहरूबीचको दौडमा भाग लिन बाध्य पार्छ।
यद्यपि कर्पोरेट कर दरहरू कुनै न्यून समयमा छन्। आईएमएफको अनुमान छ कि दशकौंको वित्तीय संघर्षको माध्यमबाट सम्भव भएको चलाखीपूर्ण बहीखाताको कारण सरकारहरू कर्पोरेट करमा एकवर्ष ६ सय विलियन डलरसम्म वञ्चित छन्। कानुनी कर बचावट र अवैध कर चोरीबीच राम्रो लाइन छ।
अर्थशास्त्रीहरू गणना गर्छन् कि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको ४० प्रतिशत नाफा कृत्रिम रूपमा उच्चकर देशहरू विशेष गरी यूरोपमा कर आश्रयस्थलमा हस्तान्तरण गरिन्छ।
चोटपटकमा अपमान थप्न डिरेगुलेसनले कल्याणकारी राज्यलाई मात्र भताभुंग पारेको छैन। बरु राज्यकल्याणका सबैभन्दा ठूला प्रापकहरूमध्ये विडम्बनाका कुरा, धनीहरू पनि छन्, जसले हामीलाई संकटहरूबाट बाहिर निकाल्नका लागि डिजाइन गरिएको उद्दार प्याकेजबाट धेरै फाइदा लिन्छन्। अमेरिका यो २००८–०९ को वित्तीय मन्दीपछि महामन्दीको समयमा देखा पर्यो र वर्तमान कोरोना भाइरस संकटको क्रममा यो फेरि भइरहेको छ।
अधिक प्रबुद्ध अर्बपतिहरू यो अनुभूतिमा पुगेका छन् कि धनको यति विशाल एकाग्रता हुनु समाजका लागि मात्र नराम्रो खबर होइन, धनीहरूका लागि पनि खराब हुन्। वारेन बफेट र बिल गेट्स दुवै धनीहरूमा उच्च करको वकालत गर्दैछन्।
तर हाम्रो बिग्रेको सामाजिक सुरक्षाजाल पुनर्निर्माण गर्न र उनीहरूले उचित दरले बुझेको असमानता हटाउनका लागि कतै नजिक छैन। संसारको सबैभन्दा गरिबीलाई गरिबी हटाउन र निको पार्ने वातावरणीय विनाश हामीमाथि यस्तो चरम भयो।
अर्को समाधान भनेको अर्बपतिहरूका लागि स्वेच्छाले वञ्चित गर्न सकिन्छ। बफेट र गेट्सले केवल उनीहरूको पैसा दिने वचन दिएका छैनन्, उनीहरूले तथाकथित दिने प्रतिज्ञा पनि स्थापित गरेका छन्। जहाँ उनीहरूले अन्य टाइकुन्सलाई पनि भाग्यमा भाग लिन प्रोत्साहित गर्छन्।
यद्यपि मेगा धनीहरूबीचको पहलको प्रतिक्रिया वा सम्पन्न कट्टरपन्थीको रूपमा सोच्न चाहान्छु। यसले अर्बपतिहरूको कुल सम्पत्ति नियन्त्रणको तुलनामा सागरमा सानो गिरावट प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसैबीच जसले प्रतिज्ञामा हस्ताक्षर गरेका छन् उनीहरूले आफ्नो भाग्य उनीहरूभन्दा टाढा छिटो बढेको देख्छन्।
यसबाहेक परोपकारी कर र सामाजिक न्यायको विकल्प छैन। यसले सामाजिक वरीयताहरूमा सामूहिक निर्णय प्रक्रिया के हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई निर्वाचित नभएको व्यक्तिको हातमा राख्दछ। जसले अझ बढी राम्रो होेस् भन्ने चिन्ता लिएको हुनसक्छ वा सक्दैन।
यस विशाल सम्पत्तिको एकाग्रताले अर्बपतिहरूलाई यस्तो किसिमको राजनीतिक आड दिन्छ जसले एक जना मान्छेलाई लोकतन्त्रको एक मतको आधार बनाउँदछ। हामी रसिया वा अरब विश्व जस्ता तानाशाही र निरंकुश शासन प्रणालीमा शक्तिशाली ओलिगर्कीको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यापार वर्गको लागि प्रयोग गर्दैछौं।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अर्बपति र निगमहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै विशाल लोकतन्त्रले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीलाई क्षति पुर्याउँछ र मतदाताको इच्छालाई कमजोर पार्छ।
हामीलाई चाहिने कुरा भनेको अर्बपति हुनु अवाञ्छनीय बनाउनका लागि आधा बेक गरिएको प्रयासहरू होइन। हामीले करोडपति बन्न असम्भव बनाउनुपर्छ। यसलाई इकोनोमिक्स भनेर परिचय गर्न सामूहिक, विश्वव्यापी प्रयास आवश्यक पर्दछ।
यो विभिन्न संयन्त्रमार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ। समन्वित कर प्रणालीबाट यति प्रगतिशील हुन्छ कि धन र आम्दानीमा वास्तविक क्याप बनाउनका लागि यति ठूलो भाग्य निर्माण गर्न कुनै प्रोत्साहन वा सम्भावना रहँदैन।
यसले दुवै साँघुरो असमानता र विश्वभरका समाजहरूलाई तिनीहरूको सामाजिक सुरक्षाजाल मर्मत र विस्तार गर्न सक्षम गर्छ। उपेक्षित महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा काम गर्नेहरूलाई राम्रो इनाम दिनेछ।
यसले रचनात्मक, सामाजिक रूपले लाभदायक आविष्कारका लागि प्रोत्साहन बढाउने छ। किनकि मानिसहरूले महसुस गर्नेछन् कि उनीहरूको श्रमका फलहरूले मोटो बिरालाहरूलाई मात्र मोटो बनाउँदैन।